Sida Dib-u-Celinta Wetland ee Illinois leedahay Saameyn wanaagsan oo saameyn ku leh Domino dibadda ah
Barnaamijka Wetlandsland waa urur aan faa'iido doon ahayn oo loo qoondeeyay dib u soo celinta kheyraadka qoyaanka ee Woqooyi Galbeed si loo hagaajiyo tayada biyaha, kordhinta aagagga duurjoogta ah iyo kala duwanaanshaha bayoolojiga, iyo in la yareeyo dhaawaca fatahaada. Shaqadoodu waxay isku daraan laba istaraatijiyadood oo aasaasi ah: dib u soo celiya dhulalka qoyan ee badan oo ay ku dadaalaan inay soo cusboonaysiiyaan isbeddellada aasaasiga ah ee ku saabsan sida aan u maal-galinno dib-u-dhiska baaxadda ballaaran. Mashruucyadooda waxay ku saleysan yihiin Illinois, laakiin shaqadooda waxay saameyn ku yeeshaan dhaq-dhaqaaqa dib-u-dhiska ee ku yaalla Dhulka sare ee Midwest.
Illinois waa lambarka mid ka mid ah waxsoosaarka nafaqada ee qallafsan ee Gacanka Mexico ee "aagga dhintay." Wetlands Initiative wuxuu la shaqeeyaa beeraleyda Biyaha Biyaha Biyaha ee Biyaha ee Gobolka si loo muujiyo sida qoyaanka yar loo dhajiyo beeraha si dabiici ah oo si macquul ah uga saari kara nafaqooyinka ka soo baxa beeraha ka hor inta aanay galin waddooyinka biyaha.
Iyadoo hoggaanka kooxda koowaad ee beeralayda "wetland farmers" ee Illinois 'Big Bureau Creek Watershed, Horumarinta Wetlands ayaa u shaqeyn doonta si loo faafiyo waxqabadka nafaqada, kor u qaadista tayada biyaha ee aan degaanka ahayn laakiin dhammaan habka hooseeya Mississippi ee Gacanka Mexico.
Barnaamijka Wetlands ayaa qorsheynayay in uu ka qaybgalo laba ama saddex beeralay si ay u dhisto dhul bannaan oo bannaan si ay u muujiyaan asxaabtooda sida ay u shaqeeyaan; Ugu dambeyntii waxay heysteen todoba qof oo mulkiilayaasha ah oo xiiseynaya mashruuca. "Hadafkayagu wuxuu ahaa sidii loo heli lahaa laba qof oo mulkiilayaal ah oo doonaya in ay ku rakibaan dhul barxad ah si ay deriskooda u laaluashaan taayirrada, si ay u hadlaan," ayuu yiri Rick Seibert, oo muddo dheer degganaa degaanka. "Laakiin waxaa jiray saameyn baraf ah oo aan helnay beeralayda."
Marka ugu horreysa ee mashruuca ku biiro waxay ahaayeen aabaha iyo wiilka oo wada wadaag ah oo beerta dhul ballaadhan oo ku yaala biyaha. Labaduba waa kuwo maskaxda lagu hayo, laakiin wali waxay qaadatay wakhti ka hor intaanay go'aansan in ay ku rakibaan dhul qoyan. Shaqaalaha ayaa saacado badan la qaatay iyaga oo ka jawaabaya su'aalahooda, iyagoo lugaynaya hantidooda, waxayna tixgelinayaan ikhtiyaarrada meelaynta qoyaanka.